Isalathiso, Uyilo lweWebhusayithi yeShishini kunye ne-SEO-Isikhokelo seshishini
Ukuthenga kunye neenkonzo
Uluhlu lwethu lubonelela ngamashishini amaninzi onokufuna uncedo kuwo. Sikwabonelela ngeenkonzo zewebhu: Oku kubandakanya iinkonzo zoyilo lwewebhusayithi, iinkonzo zokuphucula iphepha, iinkonzo ze-SEO, uphuhliso lwesoftware, njalo njalo. Unokufumana iingcali zokubonisana ukuze wenze iakhawunti yomsebenzisi, usebenze imikhankaso yentengiso yezeNtlalontle nayo yonke enye into. Unokuqesha iinkonzo ze-SEO eziza kukunceda ubeke iwebhusayithi yakho ngaphezulu kweinjini eziphambili zokukhangela ezinje ngeGoogle, iBing, Yahoo kunye nezinye iinjini zokukhangela ezifanayo. Abacebisi bethu banokukunceda udidi lwamagama aphambili afanelekileyo kwaye uncede abantu bafumane iwebhusayithi yakho.
Iinjini zokuKhangela zikwenze kwaba lula kakhulu ukukhangela izinto ngokufanelekileyo, nje ukuba wenze uphando uyakwazi ukufumana izigidi zeziphumo zophendlo kuyo yonke injini yokukhangela enje ngeGoogle, Yahoo kunye neBing, njl.njl. Kuyanceda ukufumana ishishini, inkonzo okanye Imveliso abantu abanokufuna ukuyithenga.
Uluhlu lwethu luvumela amashishini okanye abanini bewebhusayithi ukuba bongeze iwebhusayithi yabo kulawulo lwethu. Xa ishishini longezwa kwisikhombisi, sisebenza njenge-backlinks kwiwebhusayithi ephambili kwaye sonyusa negunya lesizinda. Sebenzisa iinkonzo ezifanelekileyo ze-SEO kuqinisekisa ukuba uyakwazi ukunyuka ngaphezu komntu okhuphisana naye ngokwemiqathango yeinjini yokukhangela.
Kukho izinto ezininzi ze-SEO eziza kuthotyelwa ziiwebhusayithi ukuqinisekisa ukuba bayakwazi ukuphakama ngaphezulu kwinjini yokukhangela. Okukhona inani lezinto ezikwaziyo ukwenza ukuba iiwebhusayithi zikwazi ukwandiswa, kokukhona liyakwazi ukuya phezulu kunabantu abakhuphisana nabo. Sebenzisa iinkonzo ze-SEO, kubalulekile ukuba ube nolwazi olululo malunga nayo. Uluhlu lwethu lubonelela ngeengcali ze-SEO ezinokukunceda ngokubonisana ne-SEO kunye neenkonzo ze-SEO eziza kunceda iwebhusayithi yakho ukuba ibekwe phezulu kwiziphumo zeinjini yokukhangela. Nokuba uceba ukuqala iwebhusayithi okanye sele unayo iwebhusayithi kodwa ufuna ukulungiswa, ukuqesha ingcali kuluhlu lolawulo lolona khetho lufanelekileyo.
Fumana ngakumbi malunga newebhusayithi Seo
Iinkqubo ze-SEO (iiNjini zokuSebenzisa) zindlela yokugubungela izinto ezingakumbi kwaye zibhetele kuneendawo ezikhuphisanayo.
Idesktop, iLaptop kunye nezixhobo eziPhathwayo
Iikhompyuter zale mihla kunye neegajethi zihlala zihlaziya phantse yonke imihla, iikhompyuter ziyafumaneka ngobukhulu obahlukeneyo, kunye nesoftware eyahlukileyo kunye nezixhobo, izixhobo ezongezelelweyo, njl njl.
Ukuthathela ingqalelo isisombululo sezixhobo ezahlukeneyo, kubalulekile ukuba iwebhusayithi kufuneka izilungiselele ngokwazo ukuze ilingane nazo zonke izixhobo kwaye ingabi luhlobo olunye. Eli licandelo elibalulekileyo lokufaka iikhowudi kwiwebhusayithi, apho yenza ukuba iwebhusayithi ihambelane nazo zonke izixhobo, yenze ukuba ikhawuleze kwaye iphendule kwaye igcine ikhowudi icocekile
Iinkonzo zekhompyuter zibandakanya iinkonzo zokulungisa, ukugcinwa, ukuhlaziywa kunye nokuhlaziywa okuya kuqinisekisa ukuba ikhompyuter igcina isebenza ngokugqibeleleyo. Isikhokelo sethu sikunika iingcali ezinokukunceda ngezisombululo zekhompyuter, imiba, uphuculo, ukubonisana nokwandisa isantya sekhompyuter kunye nokuzalisekisa ezinye iimfuno.
Okungakumbi malunga neKhompyuter
Iikhompyuter zeDesktop kunye neLaptop
Izixhobo eziphathwayo kunye neziNcinci
Iinkonzo zokulungisa iikhompyuter ziyafuneka xa uqala ukubona iingxaki kwikhompyuter yakho ngenxa yemicimbi kwihardware okanye isoftware.
Ukongeza okanye ukuphucula iihard drive, i-RAM, ikhadi lemizobo, njl njl okanye ukuphuculwa kwesoftware enje ngeewindows, iifayile zeendaba, njl.njl zibalulekile kuba zinceda ukugcina ikhompyuter isebenza ngokugqibeleleyo.
Ikhompyuter sisixhobo se-elektroniki kwaye iyafana nakwezinye izixhobo, nayo ifuna ukulungiswa rhoqo. Oku kubhekisa ekucoceni izixhobo zekhompyutha kunye nesoftware ukonyusa isantya sekhompyuter, ukubaphucula xa kubalulekile, njl.
Unokucinga ngokulahla ingxaki yakho wedwa, kodwa kuyacetyiswa ukuba uqeshe iingcali ezinokukunika ulwazi olubalulekileyo kunye neenkonzo zokuphelisa ingxaki.
Uluhlu lweShishini okanye uLuhlu lweeNkonzo
Isikhokelo sethu sihlanganisa uluhlu lweengcali kunye neengcali ezinokukunika izisombululo kwiingxaki zakho, zinokukunceda ekuqhubeni ishishini lakho ngempumelelo kwaye unikeze ukubonisana.
Kwiwebhusayithi, imifanekiso, iividiyo kunye nomxholo zizinto ezibonakalayo kwiwebhusayithi. Ngaphandle koku, ezinye izinto ozifumana kwiwebhusayithi zenziwa kusetyenziswa ulwimi olusisiseko lokufaka iikhowudi. Unokhetho lokujonga amaqonga e-CMS okanye abakhi bewebhusayithi kwi-intanethi ezinokukunceda ukuba wenze okanye uyile iwebhusayithi ngokulula. Nangona kunjalo, ezi uyilo zetemplate nazo zenziwe kusetyenziswa ulwimi olusisiseko lokufaka iikhowudi kwaye unokuhlela iitemplate ngokweemfuno zakho. Ukudityaniswa kweelwimi zokufaka iikhowudi akusebenzisi zimpazamo okanye kunciphise isantya sokulayisha iphepha, kuya kufuneka kube yinkxalabo.
Zimbini iintlobo zewebhusayithi ezinokuthi zenziwe
kwiSiza esiShukumayo- Ezi ziwebhusayithi ngokubanzi kwiphepha elinye elinomxholo omileyo okanye omiselweyo. Umxholo okwiwebhusayithi utshintsha kuphela xa uhlelwe ngesandla.
Indawo yeDynamic- Ezi ziwebhusayithi eziqhutywa zedatha, ezihlaziywa ngokuzenzekelayo xa umxholo okanye iphepha longezwa kwiwebhusayithi. Le webhusayithi ithathwa ngokuba yeyokusebenziseka ngakumbi kwaye injini yokukhangela inobuhlobo.
Okungakumbi malunga neeWebhusayithi
I-HTML5, CSS, PHP, JS Coding
Ukulungiswa kweekhowudi kwi-SEO
Ngaba ufuna ukubonisana?
Ukwazi ngokucacileyo ukuba yintoni inkqubo kunye nezinto ezinokwenzeka kunokunceda ukugcina imali kunye nexesha kunye nokhetho olufanelekileyo.
I-SEO ibhekisa kusebenziso lweeNjini zokuKhangela; lelinye lawona macandelo afanelekileyo ekubekeni iwebhusayithi kwiinjini zokukhangela. Kukho amanyathelo aliqela anokuthathwa ukwenza i-SEO yewebhusayithi ibe lula; oku kuqala ekuthengeni i-domain, ukufumana iserver yokubamba ukufumana amanqaku kunye nezixhobo ezibonelelayo kunye nokwenza iwebhusayithi enekhowudi ecocekileyo nesemthethweni.
Ukuze ube nokhowudo olucocekileyo nolusebenzayo, kuya kufuneka ube unolwazi malunga nokwenza iikhowudi okanye ufumane ikhowudi enobuchwephesha yokwenza iwebhusayithi yokulayisha ekhawulezayo enjini yokukhangela enobuntu kwaye enxibelelana nabasebenzisi ngokunjalo. I-SEO ibalulekile kuba yenza iwebhusayithi ibe yefanelekileyo kwaye iyivumele ukuba ifumane iziphumo ezingcono zokukhangela.
Zimbini iintlobo ze-SEO -
Oku kubandakanya ukwenziwa kweefayile, umxholo kunye nemithombo yeendaba kwiwebhusayithi yakho, kubandakanya ukwenziwa kwephepha, ukongeza umxholo kunye neethegi, njl.
Ikhonkco lokwakha, ukuhanjiswa kwe-backlinks, ukungeniswa kwoluhlu lwezinto, njalo njalo yinxalenye ye-SEO yangaphandle. Inceda iwebhusayithi ukuba yakhe igunya kunye nenqanaba eliphezulu kwiinjini zokukhangela.
Okungakumbi malunga ne-SEO
Ikhowudi ephezulu kunye neeTag eziyimfuneko
Uluhlu lwasekhaya, iindwendwe, i-Backlinks
Ngaba ufuna ukubonisana ne-SEO?
Ulwazi olucacileyo malunga ne-SEO (iiNjini zokuKhangela) zinceda ukuqala kwindlela echanekileyo.
Ukungeniswa kweinjini yokukhangela
Iinjini zokukhangela kunye nokungeniswa kwesikhombisi
Ukuze iwebhusayithi ibe yinxalenye yeWebhu eBanzi yeHlabathi kwaye ivele kwiziphumo zophando kubalulekile ukuba ungenise i-URL kwiinjini zokuKhangela nakwizintlu zezalathiso. Injini yokukhangela kunye nezikhombisi zikwasetyenziselwa ukungeniswa kwendawo yokutya. Ukungeniswa kwesikhombisi kunye nokufakwa kweinjini yokukhangela kuthathelwa ingqalelo njengesinye sezona zicwangciso zilungileyo zokwakha igunya lesizinda kunye nokwenza iwebhusayithi yakho ithandwe.
Njengoko usenza iwebhusayithi entsha kuya kubalulekile ukungenisa indawo yakho kwiinjini yokukhangela. Kukho iinjini zokukhangela ezifuna ukungeniswa rhoqo kwiphepha elitsha lewebhu olongezayo kwiwebhusayithi yakho, ngelixa zikhona ezinye iiwebhusayithi ezifuna kuphela ukuba ungenise iwebhusayithi yakho ye-URL kwaye bakhasa emaphepheni ukuze bazingenise ngokuzenzekelayo. Ukungeniswa kwesikhombisi kubhekisa ekungeniseni iwebhusayithi yakho kwimikhombandlela eyahlukeneyo esekwe kumacandelo kunye nakumacandelo
Xa uneshishini, wenza iwebhusayithi usebenzisa ulwimi olusisiseko lokufaka iikhowudi; Ugcina inqaku lokusebenzisa engqondweni kwaye ugcwalise iwebhusayithi. Into elandelayo ekugxilwe kuyo kukwizinga eliphezulu kwiziphumo zeinjini yokukhangela. Ukungenisa ikhonkco kunye nokungenisa i-backlink yindlela ye-SEO yangaphandle ekufuneka ujolise kuyo ukuze uqiniseke ukuba unegunya eliphezulu lesizinda lokubeka ngaphezulu komntu okhuphisana naye.
Ungasonwabela isibonelelo sokungenisa iwebhusayithi yakho okanye ishishini kulawulo lwethu kwizigaba ezifanelekileyo kunye nakwiindidi ezingaphantsi, apho abathengi abanokubakho banokufumana iwebhusayithi yakho okanye ishishini ngokulula.
Okungakumbi malunga neNgeniso
Iinjini zokukhangela kunye nezalathiso
Ii-Injini zokuTya kunye neZalathiso zoKondla
Ukungeniswa kweWebhusayithi kwiiNjini zokuKhangela
Ngaba ufuna ukuba singenise iwebhusayithi kanye okanye ngamaxesha amade kwiinjini yokukhangela kunye nezikhombisi ezikwi-Intanethi?
Uluhlu lweeNcwadi zeWebhusayithi
Ngenisa uluhlu lwewebhusayithi kudidi olufunwayo kunye nenqanaba elincinci ngolwazi, ilogo kunye nemifanekiso
Ukungeniswa kweWebhusayithi kulawulo lwethu
Ngaba ufuna ukungenisa iwebhusayithi kulawulo lwasimahla lwewebhusayithi?
© 2020 Onke amalungelo agciniwe,Umgaqo-nkqubo wabucala kunye neMigaqo